Cheedị: Onye zingtụnanya Image Compressor with a Modern Interface | Site na Linux
Cheedị: Igwe ihe atụ dị ịtụnanya nwere interface ọgbara ọhụrụ
N'oge ebe ọgụgụ dị obere na nke na-adịkarịghị na ebe mgbasa ozi n'ozuzu na-ekpuchi ọtụtụ ihe mmasị anyị, ọ dị ezigbo mkpa ịmara ngwaọrụ ndị na-enye anyị ohere ebuli ihe oyiyi anyị, dị ka ọ dị na Kere, a ike oyiyi Compressor nke dị mfe iji ma na-enye nsonaazụ dị mma.
1 Kedu ihe bụ Imagine?
2 Esi wụnye Cheedị
Kedu ihe bụ Imagine?
Ọ bụ ngwa ọrụ mepere emepe, eji mepụtara SdịScript con Electron na mkpakọ ọba akwụkwọ n'egwuregwu yana n'egwuregwu y Mzgweg, nke na-enye anyị ohere ịpịkọta na ịgbanwe ihe oyiyi n'ụzọ dị mfe, ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma.
Ihe oyiyi a compress bụ dakọtara na usoro JPEG, PNG na WebP, bụ obe-ikpo okwu (Linux, Windows na macOS), ọtụtụ asụsụ, o nwekwara ike ogbe ihe oyiyi njikwa.
The interface nke ngwá ọrụ bụ nnọọ kensinammuo na minimalist, mgbe eme ya, anyị dị nwere ịdọrọ ma ọ bụ tinye ihe oyiyi na anyị chọrọ na-ebuli, nke a ga-egosi dị ka thumbnails na ga-enye anyị na anyị na-atụgharị nke chọrọ usoro na / ma ọ bụ na-ahọrọ ikpeazụ àgwà nke oyiyi ahụ, oge niile anyị nwere ike ịhụ nhụchalụ nke onyogho apụtara na enwere ike iji ya tụnyere nke mbụ, iji mechaa budata ya na ndekọ nke mmasị anyị
Esi wụnye Cheedị
Ntinye nke Imagine bụ oke dị mfe, anyị ga-ebudata AppImage kacha ọhụrụ dị na tọhapụrụ ngwa ma ka anyị mebie iwu ndị a maka nrụnye ziri ezi
chmod a + x Cheedị- [v] -x86_64.AppImage # Mee ka AppImage ahụ rụọ ọrụ
./Imagine-DRvíritu-x86_64.AppImage # Wụnye ma gbaa ọsọ Chee echiche
Onye nrụnye ga-emepe ma anyị ga-enye ikikere maka ntinye nke ndị ịdabere na ya, na mgbakwunye na okike nke ụzọ mkpirisi. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịgba ọsọ ma bido nụ ụtọ mpịakọta ihe oyiyi a dị ike, n'otu ụzọ ahụ, anyị nwere ike ịnweta ngwa ọrụ na nhọrọ eserese site na ngwa ngwa.
Nke a bụ ngwa dị mfe mana ọ nwere ikike pụrụ ichebụ nnọọ mfe ụzọ mpikota onu anyị oyiyi na tọghata ha ọzọ formats site na a GUI nwere interface dị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Cheedị: Igwe ihe atụ dị ịtụnanya nwere interface ọgbara ọhụrụ
unyi anaghị arụ ọrụ na windo 10
Gịnị bụ Windows 10?
deibis contreras dijo
Ọ bụ sistemụ arụmọrụ na-abaghị uru.
Zaghachi deibis contreras
Nonsense, W10 jisiri ike mee ka ọtụtụ ndị amaghị Linux hụ ya, ọ bụ uru tosiri inwe ekele.
Etu esi egbusi ndị na-eme ihe ọjọọ na kickthemout